March | 2017 | HimiloNetwork
Zakariya March 30, 2017	Leave a comment 244 Views
Cape Town (Himilonews) – Ahmed Kathrada, oo geyfane Muslim ah kana soo horjeeday midab-takoorkii ka jiray dalkiisa Koofur Afrika ayaa Arbacadii ku geeriyooday da’da 87 jirka isaga oo ku jira isbitaalka Johannesburg. “Ahmed Kathrada wuxuu ahaa mid kamid hoggaamiyada; nin lahaa garasho xusid mudan, dhowrsani iyo horusocod,” ayuu yiri Archbishop Desmond Tutu, sida ay soo xigatay BBC-da. “Wuxuu mar u qoray madaxweynaha inuusan ...
Zakariya March 30, 2017	Leave a comment 215 Views
Washington (Himilonews) – Laga dhisay gudaha New Jersey sanadkii 2014, Xarunta Caafimaadka ee Madina Community Clinic hadafkeedu waa ugu yaboohista adeeg caafimaad oo lacag la’aan ah xubnaha katirsan bulshada Maraykanka. “Waxaynu diiradda saarnaa bulshada halkaas oo qof kasta uu heli karo adeeg caafimaad oo bilaash ah – u eegis la’aan heerka dhaqaalihiisa,” ayaa lagu qoray barta website-ka Madina Clinic. Sanadihii tagay, xaruntu ...
Zakariya March 30, 2017	Leave a comment 263 Views
Brazil (Himilonews) – Xusuuso mahadhada sheekada qiirada leh ee Hachiko – daacadkii Akita kaas oo 9 sano ku qaatay sugista saaxiibkiis inuu kasoo laabto shaqada – ogaal la’aantiisa inuu u dhintay xanuunka maskaxda kaga dhacay. Sheekadiisa waxaa hadda ku taagan Thor – oo ah Ey ay isku mid yihiin Hachiko – kaas oo qaada jidka isaga iyo saaxiibkiis ay wada mari ...
Zakariya March 30, 2017	Leave a comment 245 Views
Madrid (Himilonews) – Ma oggolaan laheyd in qof uu ka dulboodo carruurtaada sidaan oo kale? Dabcan Maya! Loo yaqaan El Colacho – afka Spain, Fantasiyaha Dhallaan Ka-dulboodka waa dhacdo shacbiyad leh oo ka dhacda degmada Castillo de Murcia oo u dhow Burgos taniyo sanadkii 1620. Asalka dhacadada waa in lix ubad oo si wacan loogu soo labisay la jiifiyo joodari laba nafar ah, waana ...
Zakariya March 30, 2017	Leave a comment 217 Views
Muqdisho (Himilonews) – Eeyuhu waxay u baahan yihiin afar xubnood oo ay ku socdaan, mise maya? Badigood haa, hayeeshe layaab maleh Eygan layiraahdo Faith. Wuxuu ku dhashay dhicis – isaga oo aan laheyn addimo dhameystiran, wuxuu kaliya ku dhashay hal lug oo hore iyo labada danbe. Waase laga reebay markii uu jirsaday 7 bilood. Hayeeshe wuxuu mahdiyay daryeelkii uu ka ...
Zakariya March 30, 2017	Leave a comment 322 Views
Thailand (Himilonews) – Meel dalxiisayaashu ay dhaweysan karaan Shabeelka si lamid ah Bisadaha, halkan waxaad ku arkaysaa waxyaalo aadan maalin kasta arki karin. Macbadka Shabeelka Wat Pha Luang Ta Bua waa keynta buudiska ee Theravada. Gudaha Thailand waxay gabaad iyo daryeelba u aheyd noole badan oo halis ugu sugan dabargo’ oo ay kamid yihiin Shabeel tira badan. Waxaa loo aas’aasay goob xanaaneed ...
Zakariya March 30, 2017	Leave a comment 315 Views
Lagos, Nigeria (Himilonews) – Arugungu waa dhacdo dhaqameed Nigerian ah oo kumaankun kalluumaysato ah ka qeyb-galaan. Arugungu waxay ka dhacdaa Kebbi oo waqooyi galbeed kaga taalla dalka halkaas oo tiro kalluumaysato ah ay ku kulmaan iyaga oo maanka ku haya hal arrin – qabashada kalluunka ugu weyn. Mar kaliya markay maqlaan dhawaqa rasaasta loo yeeriyo ayay wada galaan biyaha Matan Fada iyaga oo sidata ...
Zakariya March 28, 2017	Leave a comment 603 Views
Muqdisho (Himilonews) – Waxaa jiray waqti dunida soo maray oo dadku aysan aqoon magaca magaalo. Waxayna ku noolaan jireen caksigeeda. Ma aqoonin gaadiid bireed lagu socdaalo – iskaba daa dayuurad lagu dhoofo. Taas badalkeeda wixii agtooda yiillay ayaa uga dhifnaa wax ka badan noloshooda. Markii danbe waxaa timid nolol kale oo sidata fursado ka baxsan midda ay ku jireen ee miyiga. ...
Zakariya March 27, 2017	Leave a comment 353 Views
Moscow (Himilonews) – 8-dii sano ee lasoo dhaafay, ku dhawaad laba boqol oo ah qoysas ku nool degmada Strunino – magaalo yar oo ku taalla gobalka Vladimir Oblast ee dalka Ruushka kama aysan warwarin iibsiga Rootiga. Mahadaas waxay ku laabaneysaa deeqsiga leh dukaan weyn kaas oo si lacag la’aan ku siin jiray. Mamoud Shavershyan, wuxuu Ruushka uga yimid dalka Armenia, 25 sano kahor. Wuxuu ...
Zakariya March 25, 2017	Leave a comment 321 Views
Pretoria (Himilonews) – Kurt Minnaar, oo ah macalin 33-jir ah waxna ka dhigaya dugsiga Cape Town’s Eben Dönges High School ayaa adeegsada ciyaarta Hip-Hop-ka la yiraahdo si casharrada maadada xisaabta uu u jecleysiiyo ardayda. Heesidda ama dhageysiga muusiko aalaba lalama xiriiro fasallada ardaydu ku jirto, hayeeshe fasalka macalin Kurt Minnaar waa hordhaca xiisadda. Hal-yaqaan hore oo ciyaarta Hip-Hop-ka ah, wuxuu adeegsadaa dhawaqa muusiga si ...
Sare-u-kac ka muuqda Qiimaha Qudaarta bisha Soonqaad.
Askari toogtay gabar uu jeclaa oo diiday inuu guursado.